Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Safarka badbaadada leh ee COVID-ka ayaa la filayaa inuu ku sii shido safarka baabuurka
Baahida fasaxyada baabuur - dibadda ama UK - si degdeg ah ayey u korodhay sababtoo ah welwelka Covid iyo muhiimadda ay leedahay in weli la ilaaliyo fogaanta bulshada.
Sii wadida baahida safarka badbaadada ah ee Covid-ka ayaa la filayaa inay kiciso kor u kaca dadka fasaxa qaada ee ku baxsanaya baabuurkooda sanadka 2022, si ay bulsho ahaan uga fogaadaan oo ay u ilaashadaan xidhiidhka dadka kale ilaa ugu yaraan, ayaa daaha ka qaaday cilmi baaris laga sii daayay WTM London maanta (Isniin 1 November) .
Markii la weydiiyay: Faafida ma ka dhigtay mid aad u badan tahay inaad qaadato baabuur-caasimad (fasaxa mid ka mid ah UK ama dibadda oo aad baabuur ku safarto si aad u xaddiddo la dhexgalka dadka kale)? 50% jawaab bixiyaasha ka qayb qaadanayay Warbixinta Warshadaha ee WTM London waxay yiraahdeen 'haa'.
Cilmi-baadhista 1,000 macaamiisha UK waxay daaha ka qaadaysaa dad badan oo Wales ah iyo West Midlands waxay u badan tahay inay doortaan goob baabuur, 66% jawaab bixiyaasha Wales iyo 61% West Midlands, oo ku jawaabay haa.
Jiilka da'da yar ayaa aad ugu janjeera in ay ku dhuftaan dariiqa gaariga, sida laga soo xigtay cilmi-baarista, iyada oo 62% 18-21s, 58% ee 22-24s, 63% 25-34s iyo 59% 35-44s ayaa leh Faafida Covid waxay ka dhigtay inay aad ugu badan yihiin inay baabuur ku fasaxaan oo ay xaddidaan la macaamilka dadka kale. Kaliya 39% ee ka weyn 55 jir ayaa sheegaya in ay aad ugu dhowdahay in ay tixgeliyaan goob-gaari.
WTM London waxay ka dhacaysaa saddexda maalmood ee soo socda (Isniinta 1 - Arbacada 3 Noofambar) ee ExCeL - London.
Agaasimaha Bandhigga WTM ee London Simon Press ayaa yiri: "Baahida ciidaha ee baabuur - dibadda ama UK - si degdeg ah ayey u korodhay sababtoo ah welwelka Covid iyo muhiimadda ay leedahay in weli la ilaaliyo fogeynta bulshada.
"Waxaan filaynaa in baahidani ay ka boodi doonto-bilaaban doonto isbeddel cusub oo socdaal ah, iyada oo hawl-wadeennada iyo meelaha ay u socdaalayaan ay dib u soo nooleynayaan si ay u bixiyaan doorashooyin cusub oo loogu talagalay kuwa baabuurta sameeya ee doonaya inay gadaal ka riixaan 2022."